Mitadiava rakitra sy antontan-taratasy haingana kokoa amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa maro aminareo no efa mahalala ny fomba fiasa sy ny hitsin-dàlana maro izay omen'ny OS X antsika amin'ny lakile cmd, saingy misy hatrany ireo mpampiasa mety tsy mahita ireo torohevitra ireo na tsy mahatadidy azy ireo. Androany dia mamelombelona ny iray amin'ireny hitsin-dàlana mahaliana ireny izahay izay manome antsika vokatra bebe kokoa rehefa mipetraka eo alohan'ny Mac isika ary miasa izany mahita haingana kokoa ny fisie amin'ny Finder toy izay mandeha mizaha folder amin'ny alàlan'ny fampirimana.
Misy safidy maromaro hahitana ireo rakitra ananantsika amin'ny Mac, ny olana hitan'ny mpampiasa sasany dia izany tadidinay ny anaran'ny fisie hikarohana fa tsy tadidinay ny toerana toerana nitehirizana azy ary ity misy vahaolana tsotra be.
Momba ny fanindriana raha vao ao anatin'ny Finder isika fitambarana key cmd + F
Raha vantany vao nasiana ny tendrony cmd + F araka ny hitantsika eo amin'ny sary etsy ambony, dia hiseho ny bara fikarohana izay hanara-maso ireo rakitra rehetra ananantsika amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny litera voalohany manomboka manoratra.
Raha ny mahazatra, rehefa manomboka mampiasa Mac isika dia tsy mila manararaotra ireo karazana toro-hevitra ireo hahitana antontan-taratasy na rakitra voatahiry satria vitsy ny olona, ​​saingy amin'ny fotoana fampiasana azy dia feno ny milina isan-karazany ary mora sy mamokatra kokoa izany. hahitana azy raha mampiasa ireto torohevitra ireto izahay hikarohana ny fisie antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny fampirimana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Mitadiava rakitra sy antontan-taratasy amin'ny anarany ao amin'ny OS X haingana kokoa
Farany nohavaozina ny fampiharana Weather Wall